Afrobasket-vondrona B sy D : Babangoana ireo sezan’ny lapan’ny Fanatanjahantena
Tsy ampy ny antsasak’ireo seza eny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena intsony no feno omaly faharoa ho an’ny digan’ny fifanintsananaisam-bondrona amin’ny fiadiana izay ho tompon-dakan’i Afrika.
Antonyiray lehibe mahatonga izany ny tsy filalaovan’ny ekipan’ny malagasy izay niala sasatra kely. Ny ankamaroan’ireo tonga omaly dia liana amin’ireo mpilalao afrikanina hafa kalaza avy amin’ireo firenena ngeza eo amin’ny sehatry ny basket afrikanina, toy ny Angoley, Senegaley, Maroakanina, Tonizia sy ny maro hafa. Antony iray hafa ihany koa ny faharesentsika, omaly. Nalaelo ihany ny ankamaroan’ireo mpijery, indrindra fa tokony ho resintsika ihany ry zareo Mozambikianina saingy tsy ampy traikefa.
Andrasana indray ny fahatongavan’ireo mpijery marobe anio, satria hiverina hiakatra sehatra indray ry Naguib sy ny ekipany amin’ny 5 ora 30 hariva, raha araka ny fandaharam-potoana ka hifandona amin’ny Malianina. Hialoha ireo dia efa hisy lalao roa, dia ny fihaonan’i Afrika Atsimo sy Kamerona, arahin’ny lalaon’i Mozambika sy Nizeria ary mbola hisy lalao iray koa aorian’io dia ny fifampikatrohan’i Côte d’Ivoire sy Egypta.